Ogaden News Agency (ONA) – Gudiga Jaaliyada Ogaadeniya ee Finland oo Kulan isugu Yimid.
Gudiga Jaaliyada Ogaadeniya ee Finland oo Kulan isugu Yimid.
Waxaa kulan muhiima isugu yimaaday gudiga fulinta jaaliyada Ogaadeniya ee wadanka Finland maanta oo ay taariikhdu ku beeg nayd 11/08/18 waxaana lagu fur furay sidii caadada inoo ahayd aayado quraanka kariim ka ah.
Shirkan gudiga oo ahaa mid ahmiyad wayn u lahaa gudiga Jaaliyada ayaa waxaa furay gudoomiyaha Jaaliyada Ogaadeniya ee wadanka Finland mudane Abdirashiid Colaad, gudoomiyaha ayaa wuxuu ka hadlay xaalada guud ee halganka Ogaadeniya meesha uu maraayo iyo wixii looga baahan yahay dhamaan xubnaha jaaliyada iyo guud ahaanba shacabka soomaaliyeed.
Shirka ayaa waxaa looga hadlay colaada laga dhex abuurayo dadka soomaaliyeed iyo Oromada taasoo aan faa iido ugu jirin guud ahaan ba labada shacab ee dariska ah.
Gabagadii shirka ayaa waxaa ka hadlay xubno kamida gudiga jaaliyada waxaana hoosta laga xariiqay in lasii laban laabo dadaalada lagu dooniyo in lagu xoreeyo dhulka Ogaadeniya lana garab istaago halganka ay JWXO hormuudka ka tahay.